Ka dib kiimiko ku daaweyn iyo labo mastektomi, waxay baratay in ogaanshaha cudurka kansarku inuu khaldan yahay - TELES RELAY
ACCUEIL » DARYEELKA CAAFIMAAD Ka dib kiimiko ku daaweyn iyo labo mastektomi, waxay baratay in ogaanshaha kansarka ay ahayd mid khaldan
Ogaanshaha inaad qabto kansarka naasuhu waa mid ka mid ah wararka ugu xun, gaar ahaan haddii cudurka lagu ogaado inuu yahay "sedex taban".
Waa maxay saddex-laab kansarka naasaha?
Sida laga soo xigtay bogga BreastcancerOrg, waxa loogu yeero kansarka naasaha '' Triple negative ') kansarka soojiida leh ma leh estrogen receptor, qanjirka' prostrogen 'ama borotiinka' HER2 '. Waxaa lagu soo bandhigayaa 10 ee 20% kiisaska, badanaa waa nooc ka badan kansarka daran.
Da'da 25 sano, Sarah Boyle waxay ku baratay naxdin leh inay la il daran tahay saddex-laab kansar naasaha ah. Warkaan cabsida leh wuxuu ku dhacay 2016 intii ay ku jirtay Isbitaalka Jaamacadda Royal Stoke Hospital wax yar ka dib dhalashada cunuggeeda koowaad.
Maalin kasta StokeSentinel Waxay shaaca ka qaadday in Sarah aysan lahayn wax kale oo aan ahayn inay la kulanto cudurka: waxay soo martay kemotherabi iyo laba masectomi si looga hortago faafitaanka kansarka.
Ma ahayn ilaa Luulyo 2017 in dhakhaatiirta isbitaalka ay ogaadeen qalad weyn: biopsy ee Sarah si liidata loo duubay oo haweeneyda da 'yarta ah runtii kuma dhicin wax kansar ah. Way ka raaligelisay jahwareerka culus, laakiin Sarah waxay aad uga walwalsan tahay cawaaqibka ka dhalan kara daaweynta culus ee ay ku qasban tahay inay ku dhacdo.
Waxay ka baqday, tusaale ahaan, inay naasaheeda ku gayn karto halis muddo dheer ah oo kansar ah, iyadoo aan la xusin murugada nafsiyan ee tijaabada noocaas ah.
Waxay sidoo kale xustay caqabado kale oo ka dhashey dhammaan howlahan aan faa'iido lahayn, sida awood la'aanta naasnuujinta canugeeda bilaha 7.
Sarah waxay ku tilmaamtay khibraddan "mid aad u adag":
Markaan bartay inaan kansar qabo waxay ahayd wax laga xumaado, laakiin inaan u adkaysto dhammaan daweynta iyo qalliinnada oo mar dambe loo sheego in aan loo baahnayn waxay ahayd naxdin.
Waxay sharraxday inay rabto inay la wadaagto sheekadeeda rajada ah in qof kale uusan u dulqaadan doonin wax la mid ah.
Tusmooyinka qaarkood ee lagu taageerayo qof aad jeceshahay oo qaba kansar
Ogaanshaha cudurka kansarka way adag tahay in la aqbalo. Haddii mid ka mid ah kuwa aad jeceshahay uu qabo cudurkaan, waxaad u badan tahay inaad la yaabto sida loo caawiyo. Waa kuwan talo bixinno ka socda goobta WebMD:
U diyaargarow isbedelka niyadda iyo dabeecadda kuwa dhibaataysan;
Ku dhiiri geli in ay firfircoonaan ahaadaan oo ay daryeelaan intii suuragal ah;
Weydii xubnaha kale ee qoyska inay sameeyaan wixii karaankooda ah inay ku caawiyaan, xitaa haddii ay kaliya dhageysaneyso.
Cudurka Sarah wuxuu ahaa mid khaldan, laakiin kumanaan kun oo qof ayaa la xanuunsanaya cudurkaan waxayna u baahan yihiin taageerada dhan ee ay karaan. Haddii qof qoyskaaga ka mid ahi xaaladdan ku jiro, isku day inaad xaadir noqoto.